Ababhali abali-10 ababengaziwa kude kube semva kokufa kwabo | Uncwadi lwangoku
Ababhali abali-10 ababengaziwa de kwasemva kokuba beswelekile
ULidia Aguilera | | Ababhali, Imbali yoncwadi
Inani lababhali abakho lingenakucingwa, izigidi zabantu zibhalela ukonwaba kwazo okanye ukonwabela abanye. Nangona kunjalo, ngenani elikhulu kangaka lababhali, ayothusi into yokuba kukho abanye ababhale amabali amnandi kakhulu kwaye namhlanje bayaziwa kwihlabathi liphela kodwa, ngexesha lakheXa babebhala ezo ncwadi, zazingaziwa ngenxa yokungaziwa, ukusasazeka okuphantsi okanye iingxaki ezininzi eyayikhona ngelo xesha kwaye yenza ukuba kube nzima ukuba umntu ohluphekileyo aqatshelwe.
Namhlanje ndibonisa abalishumi kwaba babhali ukuba uyazi ngokuqinisekileyo kodwa onamabali angazange abenantsingiselo de wasweleka.
4 UAndrés Caicedo (1951-1977)
7 UCarlo Collodi (1826-1890)
9 Umlobi kaEdgar Allan (1809-1849)
Kwakungekho kudala kangako ukuba Isaga yaseMillenium Waqala ukunyathela, esiba enye ye-sagas efanelekileyo yohlobo lomcuphi. Le saga ineekopi ezingaphezu kwezigidi ezingama-78 ezithengiswe kwihlabathi liphela, ukongeza kwinguqulelo yefilimu eyenziwe.
Ewe, lo mbhali wayesilwa iminyaka emininzi esenza ukuba i-trilogy yakhe ipapashwe kwaye kwakungekho nasemva kokuba eswelekile ukuba le saga yaqala ukuba nefuthe eliyifaneleyo.
Ngokunokwenzeka omnye wababhali abafuna kakhulu ukupapasha, ithini imeko leyo Uzibulale emva koxinzelelo awangena ngalo xa wayegxothwa ngabapapashi abaninzi. Ukuba le ndoda ibingazibulali ineminyaka engama-32, ngendiyibonile indlela umsebenzi wayo, "Icebo lezidenge" laphumelela ibhaso lePulitzer ngo-1981. Lo msebenzi wakwazi ukufikelela kwizandla zethu enkosi kunina, owufumene kwidrowa kwaye wagqiba kwelokuba awupapashe.
Njengomnye wabameli boncwadi lwaseArgentina, wayengomnye umbhali ogqibe kwelokuba akhethe indlela yokuzibulala ngo-1996 ngenxa Ukukhathazeka wayekuva emva kokwaliwa kaninzi emsebenzini wakhe "Umguquleli" kuba bathi yiyo intsonkothe ​​kakhulu ukuba ifundwe yexesha.
UAndrés Caicedo (1951-1977)
Omnye umbhali, kule meko Colombian, ogqiba ukuzibulala ngo cinga ngokuphila ngaphezulu kweminyaka engama-25 ulihlazo yomntu. UAndrés Caicedo wayengumgxeki wefilimu kunye nomculo. Emva kokufumana ikopi yencwadi yakho "Umculo omde"Wanelisekile kukwamkelwa kwakhe, wagqiba ekubeni athathe iipilisi ezingama-60 ze-secobarbital.
Umbhali waqaphela eyakhe inoveli "Ferdydurke", ndagqiba kwelokuba ndizibaleke ngokwasengqondweni. Ngo-1939 wagqiba ekubeni aye eArgentina, apho emva kweentsuku ezimbalwa kwaqhambuka iMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, eyayimthintela ukuba angabuyeli kwilizwe lakhe. Umbhali usindile enkosi kumaxesha ahlukeneyo kumaphephandaba. Iincwadi zakhe kudala zingashicilelwa.
Uzalelwe eChile, uthathwa njengomseki wentshukumo ye-infrarealist. Wayedla ngokungenela ukhuphiswano lweencwadi olukumgangatho osezantsi kwaye waba ngomnye wababhali abanempembelelo kulwimi lwaseSpain. A unyaka emva kokubhubha kwakhe emva kokusilela kwesibindi, kwapapashwa umsebenzi wakhe "2666".
UCarlo Collodi (1826-1890)
Intatheli kunye nombhali weFlorentine, owaziwa ngokuba ngu "Pinocchio", umntwana weplanga. Ukudalwa kweli bali kwenziwa ukuhlawula amatyala osapho. Ngo-1940, kwiminyaka eliqela emva kokufa kwakhe, uDisney wagqiba kwelokuba enze uhlengahlengiso kweli bali.
AmaJuda azalelwe eRashiya, wasweleka kwiinkampu zoxinaniso zaseAuschwitz. Iintombi zakhe zasinda kubuNazi kwaye zagcina incwadi yamanqaku kanina kwaye emva kweminyaka engama-50 baba nesibindi sokuyifunda, befumanisa ibali "French Suite" kwaye siyipapasha ngo-2004.
Umlobi kaEdgar Allan (1809-1849)
Omnye wabalinganiswa abaziwayo kuncwadi, banconywa ngababhali abaphambili abanjengoOscar Wild okanye uJorge Luis Borges, uPoe wabandezeleka ngelishwa de wasweleka ngo-1849 emva koxinzelelo lokufa komfazi wakhe. Amabali akhe kwavela kukuphazamiseka kwemithambo-luvo eveliswe butywala, Ukusuka apho wabhala uloyiko kunye namabali angaphezu kwendalo.
UKafka wayengomnye wababhali abaphambili benkulungwane yama-XNUMX. Emva kobuntwana obunzima, wabhala kwaye wapapasha ngamanye amaxesha kwaye, kungekudala emva koko, wafunyaniswa enesifo sephepha. UDora Diamant wagcina imfihlo yokubhala kwakhe Kude kube namhla kusaqhubeka ukukhangelwa kwamaphepha athile.
Aba babhali baphila ngamaxesha anzima, njengoko uninzi luthathe isigqibo sokukhetha ukuzibulala okanye ukusweleka ngenxa yokugula. Into ecace gca yeyokuba inkulungwane yeshumi elinesithoba neyamashumi amabini yayingeyo minyaka yobomi obulula, nangona ngaphandle kolo hlobo lobomi uninzi lwabo belungayi kwaziwa namhlanje kuba ngenxa yemeko zabo babhale le misebenzi inefuthe elinje namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Ababhali abali-10 abangazange baqatshelwe de bafe
UGuillem Gonzalez sitsho
Uluhlu olunomdla kodwa olunempazamo ebalulekileyo. 'UFerdydurke' nguGombrowicz ayisiyiyo kwaphela "inoveli yolutsha", ngaphandle kwento yokuba umbhali wayibhala esemncinci. 'Abacuphi basendle' bakaBolaño bapapashwa ngo-1998, kwiminyaka emihlanu ngaphambi kokuba asweleke, kwaye sele emenze waduma; le bayipapasileyo emva kokuba beswelekile kwaye bamnika udumo olukhulu yayingu-'2666 '(nangona yavela ngo-2004, kuphela unyaka emva kokuba eswelekile).
Phendula kuGuillem González
Enkosi kakhulu ngokulungiswa, kubonakala ngathi ndibhidekile lulwazi oluninzi olujikeleza kwi-intanethi.
Izifundo zikaCarrolian sitsho
Enye impazamo enkulu. Ebomini, uCarlo Collodi wayesaziwa kwaye ethandwa kwilizwe lakhe ngamabali abantwana bakhe. Into yokuba wayengaziwa kwilizwe liphela ayithethi ukuba akafumananga kwamkelwa de iDisney yaguqula iPinocchio. Ngapha koko, kwinguqulelo yokuqala yebali, unodoli waxhonywa ezandleni zeFox kunye nekati, kwaye ibali laphelela apho. Uninzi lwabafundi babhala iileta becela uCollodi ukuba "avuse" uPinocchio, kangangokuba uCollodi walichola waqhubekeka nebali, esenza ukuba Intombazana eBlue-Haired imhlangule. Ukuba wayengenguye umbhali owaziwayo ngelo xesha, umsebenzi ngewungazange ufike kwiintsuku zethu njengoko sisazi ngoku.
Phendula kwizifundo zikaCarrolian
U-Estelio Mario Pedreañez sitsho
Olahlekileyo kuluhlu yayinguMiguel de Cervantes omkhulu, umyili weNoveli yaMhlanje ene "Don Quixote" (1605-1615), owayekwixesha lakhe wayethathwa njengombhali "weholide", oko kukuthi, ahlekisayo, ohlekisayo, owesibini rate, kunye namashumi amaninzi eminyaka emva kokubhubha kwakhe kwi-1616 uxabiso lwakhe lwaqala njengombhali onzulu, enomxholo obanzi wefilosofi kunye nokufaneleka okukhulu njengokuhlaziya ibali. AbakwaCervantes babenqwenela ukungafi koncwadi ebomini kwaye abantu ababephila ngexesha lakhe babemjongela phantsi bade bamthi "bubuchule bokubeka", into engafanelekanga ukubonisa ukuba, engenalo ulwazi loncwadi, wabhala umsebenzi omkhulu nge-carom, ummangaliso okanye ithuba. Ithisisi ebubuxoki yoyiswe ziinyaniso ezimbini: 1) Wayeyindoda efundisayo enenkcubeko ebanzi yokufunda. 2) Wabhala u "Don Quixote" enolwazi olupheleleyo kunye namabhongo okukhangela ukungafi koncwadi okwakuza kuwenza ube ngumgangatho omtsha, okwaziyo ukufaniswa noHomer, uVirgil, uDante noAristophanes. Kwaye kwiinkulungwane emva kokufa kwakhe wazuza udumo olunjalo, waphupha kwaye wayefanelekile.
Phendula uEstelio Mario Pedreañez
Ababhali abakhulu ababesisitabane
Umsebenzi kaRay Bradbury usiwe kumdlalo bhanyabhanya